कलंकीमा खसी, भक्तपुरमा च्यांग्रा : ग्राहक कम हुँदा पर्खाइमा व्यवसायी, घाँस व्यापारी मख्ख !
‘दशैं आयो भन्छन्, खै यता त देखिएकै छैन, कोरोनाले लग्यो सबै,’ कलंकी खसी बजारका व्यवसायी मनोज अधिकारीको भनाइ हो यो ।
उनले भनेजस्तै अहिले पहिलेजस्तो दशैंको चहलपहल छैन । कोरोना महामारीका बीचमा आएको महान चाड दशैंमा अपेक्षाकृत व्यवसाय नहुँदा व्यवसायीहरू अहिले हैरानीमा छन् ।
सरकारले विभिन्न किसिमले करीब ६ महिनासम्म लगाएको निषेधाज्ञाका कारण ठप्प व्यापार व्यवसायलाई दशैंले चलायमान गराउला भन्ने अपेक्षामा थिए व्यवसायी, तर यस वर्षको दशैं पहिलेको जस्तो न उल्लासमय छ, न त कुनै चहलपहल नै ।
घटस्थापनाको तेस्रो दिन सोमवार काठमाडौंको खसी बजारमा खसीबोका व्यवसायी तथा ग्राहकहरूको केही भीड देखिन्थ्यो ।
तर त्यो भीड गत वर्षका तुलनामा निकै कम । व्यवसायीहरूको भाषामा त्यो भीड गत वर्षहरूको दशैंको तुलनामा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै हो ।
खसीबजारका व्यावसायीहरूले घटस्थापनाकै दिनदेखि खसीबोका बिक्री गर्न शुरू गरे, तर बजार शून्यप्रायः भयो । तेस्रो दिन भने तुलनात्मक रूपमा केही बढी बिक्री भयो ।
व्यवसायी अधिकारी गत वर्षहरूको तुलनामा अहिले बजार मन्द जस्तै भएको बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा दिनको १५/१६ वटासम्म खसीबोका बिक्री गर्थ्यौं, यसपालि त्यसो भएन ।’
कोरोना महामारीका कारण व्यापार कम भएको उनको अनुमान छ । उनले भने, ‘हिजो (आइतवार) बिक्री नै भएनभन्दा हुन्छ, आज चाहिँ पाँच/छ वटा बिक्री भयो ।’
बजारमा ग्राहक धेरै नभएपनि मोलमोलाई चलिरहेको थियो । कसैले च्यांग्रा किनिरहेका थिए भने कसैले खसीबोका, जे होस् यसपालिको दशैंमा व्यवसायीले यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको अर्का व्यवसायी बताउँछन् ।
कलंकीमा खसी, भक्तपुरमा च्यांग्रा
​कलंकीमा खसीबोका दिनहुँ आयात भइरहेका छन् । करीब ५० हजाभन्दा बढी खसीबोका ल्याउने तयारीमा रहेका व्यवसायीहरूले अहिले २ हजारको हाराहारीमा खसीबोका भित्र्याइसकेका छन् ।
यसपालि कलंकीमा खसीबोका धेरै ल्याइएको छ भने च्यांग्रा निकै थोरै । गत वर्षहरूमा ७ हजार च्यांग्रा ल्याउने गरिएको भएपनि यसपालि व्यवसायीहरूले बजार मागलाई हेरेर संख्या थप गर्ने पर्खाइमा छन् । स्वभावतः च्यांग्राको मूल्य खसीबोकाको तुलनामा बढी हुँदा थोरै मात्र खरिदबिक्री हुन्छ । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘स्वाद थाहा पाउनेहरूले अहिले पनि लिइरहेका छन्, नत्र त खसी नै रुचाउँछन् ।’
उपत्यकावासीलाई भक्तपुरमा पनि बिक्रीका लागि च्यांग्रा राखिएको छ । खसीबजारमा भन्दा भक्तपुरमा च्यांग्रा धेरै छन् तर ग्राहक भने छैनन् ।
फाट्टफुट्ट देखापरेका ग्राहकलाई च्यांग्रा बिक्री गर्न तम्तयार व्यवसायीहरू पहिलेजस्तो अहिले व्यापारको समय नभएको बताउँछन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा ठूलो संख्यामा च्यांग्रा बिक्रीका लागि राखिएका छन् ।
‘महँगो मूल्यमा ल्याइएको च्यांग्राले उपयुक्त बजार पाउन सकेको छैन, कोरोनाले समस्या ल्यायो,’ च्यांग्रा व्यवसायी रवि सिंह लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘सधैंको व्यवसाय सम्हाल्नै पर्‍यो नि ।’
उनले दिनमा २/३ वटामात्रै च्यांग्रा बिक्री भइरहेको बताए । उनले भने, ‘आज बिक्री भएन, भोलि त बिक्री हुन्छ भन्ने आशा छ ।’
‘च्यांग्रा महंगो छ, महंगो वस्तुको धेरै जोखिम हुने रहेछ, हामी त यही रात कटाउने विचारमा छौं ।’
सल्लाघारीमा बिक्रीका लागि राखिएका सबै च्यांग्रा मुस्ताङका हुन् ।
सहुलियतमा बढ्दो आकर्षण
सधैं झैँ यसपालि पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियत दरका खसीबोका बिक्री गर्न शुरू गरेको छ । सोमवारदेखि बिक्री शुरू गरेको लिमिटेडमा आकर्षण पनि धेरै छ ।
लिमिटेडले खसीबोका प्रतिकेजी ५ सय ५० रुपैयाँको दरमा बिक्री गरिरहेको छ । यद्यपि निजी व्यवसायीहरूले ६ सय ५० मा बिक्री गर्दैछन् । निजीमा भन्दा सहुलियतमा धेरै नै सस्तो पर्ने भएकाले अधिकांश ग्राहक सहुलियततिरै जान्छन् ।
लिमिटेडले सोमवार ६ सयवटा खसीबोका बिक्री गरेको छ । अर्थात् पहिलो दिन ल्याएका सबै खसीबोका बिक्री भए ।
बेलुका र बिहानसम्ममा अहिले करीब ५ सय खसीबोका लिमिटेडमा आइपुगेका छन् ।
लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार बजार मागलाई हेरेर आवश्यक खसीबोका ल्याउने लिमिटेडको तयारी छ ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘पहिलो दिन अत्यधिक बिक्री भयो । सबै बिक्री भयो, दोस्रो दिनको बजार कस्तो हुन्छ, त्यसैअनुसार खसीबोका थप गर्छौं ।’
उनले खसीबोका साँच्चै सहुलियत दरमा बिक्री गरिएकाले आकर्षण बढेको बताए । ‘स्वाभाविक रूपमा बजार हस्तक्षेप गर्नु नै थियो, हामीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सहुलियत दरमा खसीबोका बिक्री गरेका हौं,’ उनले भने ।
लिमिटेडले च्यांग्रा बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सकेन । जसकारण च्यांग्राको भाउ महंगो छ । सीईओ सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले च्यांग्रा ल्याउन धेरै प्रयास गर्‍यौं, तर सकेनौं । यसपालि च्यांग्रा ल्याउन यस्तै भयो ।’
घाँस व्यापारी खुशी !
बजारमा खसीबोका नबिक्दा घाँस व्यवसायीहरू भने खुसी हुन्छन् ।
कलंकी खसी बजारमा प्रतिभारी ८ सय रुपैयाँका दरले घाँस बिक्री भइरहेको छ । घाँस बेच्दै गरेका एक महिलाले भनिन्, ‘खुशी हुनु कि दुःखी ? दशैं लाग्यो, घाँस नै बेचेर भने पनि आम्दानी त गर्नुपर्‍यो ।’
यता भक्तपुरमा च्यांग्राका लागि परालको थुप्रो लगाइएको थियो । प्रति रोपनीका हिसाबले पराल किनेर च्यांग्रालाई दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायी रवि सिंह भन्छन्, ‘रोपनीको १२/१५ हजार पर्छ । एक रोपनीको परालले ४/५ दिनलाई पुर्‍याउँछौं ।’
भीडभाडको छैन व्यवस्थापन
कोरोना महामारीका बीचमा यसपालि दशैं मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू जारी गरेको छ । यद्यपि कलंकीको खसी बजारमा त्यो प्रोटोकलको पालना देखिँदैन ।
ग्राहक र व्यवसायीहरू निर्वाध रूपमा खसीबोकाको मोलमोलाई गरिरहेका देखिन्छन्, जहाँ न सामाजिक दूरी छ, न त मास्क नै ।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको खसी बिक्री केन्द्रमा पनि भीड उस्तै देखिन्थ्यो । खसी राखिएको ठाउँमा कसैले सामाजिक दूरी पालना गरेका देखिँदैनन् ।
खसी किन्नका लागि एकपटकमा २० जनामात्र जान पाइने व्यवस्था लिमिटेडले गरेपनि उपभोक्ताहरू एकैपटक धेरै जम्मा हुँदा भीड भएको लिमिटेडका सीईओ सुवेदीले लोकान्तरलाई बताए ।
उनले पहिलो दिन भीड भएपनि आगामी दिनमा सुधारका उपाय अवलम्बन गरिने बताए ।